Pakistan Iyo Turkiga oo Xalkii Azerbaijan Kadib Yemen Awood Kala Wareegey Imaraad Iyo Sucuudiga - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalPakistan Iyo Turkiga oo Xalkii Azerbaijan Kadib Yemen Awood Kala Wareegey Imaraad Iyo Sucuudiga
Turkiga Ayaa Soo Bandhigay Xalalkiisa uu ku Xalinayo dagaalka Yemen,Lakiin Wuxuu U Sheegay Labada Xulufo ee Ugu Tunka Weyn Isbahaysiga Carabta Hadii Ay Caqli leeyahin Maanta Inay U Furan tahay Turkiga Inay Kala Kaashadaan Xalkiisa Yemen.
Waxaana Turkiga Is Bar Bardhigay 2 Sano oo Xalkiisa Diblumaasiyadeed Ah wax Uga Keenay,Libya,Suuriya,Azerbaijan Iyo 5 sano oo dagaal Yemen xal Uga Keeni waayeen,kadib Turkiga Ayaa Sheegay wax sababay Inay Xalkani ka Keeni Waayaan Yemen oo kaliya Hadana Ay Doonayaan Inay islaamka Ugu Qabtaan.
Sida uu Sheegay Yaasiin Aktay lataliyaha madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan, oo Weerar Xoogan Ku Qaaday Sacuudiga iyo Imaaraadka maqaal uu ku qoray wargayska “Yeni Safak”,ee kasoo Baxa Turkiga, isagoo cambaareeyay dhaleeceynta Riyadh iyo Abu Dhabi ee Ankara iyo sheegashadooda ku saabsan faragelinta Turkiga ee faragelinta. Gobolka carabta.
Aktay wuxuu tixgaliyay maqaalkiisa in xulufada carbeed ee yemen ay kaliya ku guuleysatay inay sii xoojiso dhibaatada halkaas ka jirta, halka Ankara ay soo bandhigtay “tusaalooyin lagu daydo marka la eego nabadeynta gobalada aduunka.
La-taliyaha Erdogan ayaa diiday dhaleeceynta lagu eedeeyay Turkiga ee faragelinta arrimaha waddamada Carabta, isagoo xusay in “dhaleeceeyayaashan laftoodu kuma guuleysan inay xalliyaan mushkiladda toban sano jirsatay, halkii ay ku xallin lahaayeen xallinteeda oo ay sii adkeeyeen. ”
Aktay wuxuu weeraray doorka isbahaysiga carabta, asaga oo sheegay in isbahaysiga ay hogaaminayaan Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka ee Yemen ay cadeeyeen, mudadii 5ta sano ahayd, awood la’aanta inay “ka adkaadaan Xuutiyiinta,” isagoo raaciyay “tan macnaheedu maaha dabcan in awood la’aantoodu ay ka timaaddo xoogga Xuutiyiinta, taa lidkeed, maadaama Xuutiyiinta, wax kastoo awoodooda ah oo ay ka helaan Iiraan, aysan ku guuleysan doonin inay ku kacaan shacabka Yemen.
Sida laga soo xigtay la taliyaha Erdogan, “Dhibaatada ugu weyn waxay tahay in ciidamada isbahaysiga, inta ay la dagaalamayaan Xuutiyiinta, ay sidoo kale wadaan siyaasad aan la isku halleyn karin oo wiiqaysa dhinacyada kale ee Yemen,” maadaama “mudnaanta ciidamada isbahaysiga aysan horay u aheyn inay nabad keenaan ama ay xasiloonida dadka Yaman, ”Taas bedelkeeda, sameynta dowlad iyo maamul iyaga raaca oo amar ka hela iyaga. ”
Wuxuuna intaas ku daray, “Sida kaliya ee lagu gaari karo xasilloonida Yemen waxay ahayd in la aqoonsado dhammaan qaybaha dadka Yaman, iyo in loo furo wadada jawi wada-hadal oo nabad u keenaya dhammaan qaybahaas,” isagoo tixgelinaya taas “siyaasad ku saleysan isticmaalka dhinac ka mid ah midka kale la’aantiis, waxba ma soo kordhin karto. ” Xaqiijinta midnimada iyo xasiloonida dal.
Aktay wuxuu intaas ku daray in waxa arrimaha sii adkeeyay ay ahayd in “labada shuraako ee ugu weyn isbahaysiga ay raacaan laba siyaasadood oo iska soo horjeedda Yemen. Markii aan eegno Imaaraatka, waxaan ogaanay inaysan waligeed ka waaban, markii loo baahdo, inay iskaashi la yeelato Xuutiyiinta isbahaysigu wuu dagaalamayaa. ”
Sida laga soo xigtay sarkaalka Turkiga ah, “u aragtida xisbiga Islaax, oo loo arko kan ugu abaabulsan uguna sharciyeysan heerarka dhammaan dhinacyada Yemen, cadaw ahaan, markaa tani waxay ka dhigan tahay baabi’inta dhammaan qeybaha Yemen, iyo in dad kale laga keeno dibadda.
Dhinaca kale, la taliyaha Erdogan wuxuu tixgeliyey in “laga soo bilaabo xilligii uu Turkigu soo galay Liibiya dhinaca dawladda dib-u-heshiisiinta, qulqulka xaaladdu si dhakhso leh ayuu uga beddelay dagaalladii sokeeye wuxuuna u beddelay marin dhinaca nabadda iyo xasilloonida ah. Laga soo bilaabo xaalad caadeysatay burburka iyo duminta ilaa deegaan ka markhaati kacaya dib u dhis iyo dib u habeyn, ”halkaas oo” dadka Liibiya hadda, oo ay la socdaan dhammaan dhinacyadooda iyo qeybahooda, ay bilaabeen inay ka wada hadlaan qeexidda mustaqbalkooda. ”
Suuriya gudaheeda, sida uu sheegay Aktay, Turkigu wuxuu ku guulaystay inuu abuuro “jawi nabadgelyo leh ku dhowaad 6 milyan oo Suuriyaan ah oo aan haysan nooc nabadgelyo ah sannado badan, ka dib markii Turkigu ku deg degay inuu caawiyo iyaga oo u aasaasay goobo ammaan ah oo ay gabaad ka helaan. ”
Wuxuu tilmaamay in “Turkigu uu ku guuleystay inuu xasilo xal waara iyo nabad ka hirgaliya magaalada Karabakh, oo mudo 28 sano ah la haystay, laakiin markii Turkigu soo galay fagaaraha iskahorimaadka sidoo kale casuumaad uu ka helay Azerbaijanis, xaaladdu si dhakhso leh ayey isu bedeshay si wanaagsan . Haatan waxaan ogaanay in reer Armenia ay bilaabeen inay ka baxaan deegaanadaas oo ay qabsadeen sanado.